Amalungu esityalo: inkcazelo kunye neempawu | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Uninzi lwabantu luyakwazi ukuchonga eyona nto iphambili Amalungu esityalo njengoko kukho ii-electron ezinomthi we-polar kuso nasiphi na isityalo. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba akukho nxalenye nganye yesityalo ngasinye kwikhonkrithi kunye neenkcukacha.
Ngoko ke, siza kunikela eli nqaku ukukuxelela ukuba zeziphi iindawo eziphambili zesityalo ngokweenkcukacha kwaye yintoni imisebenzi yazo nganye.
1 Iinxalenye zesityalo
Ukuba sishwankathela ukuba zeziphi iindawo eziphambili zesityalo, sinokuthi zezi zilandelayo:
Oku kuthanda ukwahlula phantse wonke umntu. Noko ke, iimpawu zelungu ngalinye lesityalo azaziwa ngokubanzi ngokweenkcukacha ezinjalo ngendlela eqhelekileyo. Siza kubhala nganye nganye ukuba ngawaphi amalungu esityalo.
Isiqu yinxalenye yasemoyeni yesityalo, kwaye omnye wemisebenzi yaso kukubonelela ngenkxaso kunye nokwakheka, ukuxhasa amanye amalungu esityalo aphezu komhlaba, njengamagqabi kunye neentyatyambo. Olunye uphawu lwalo oluphambili kukuba ibonisa i-geotropism engalunganga, nto leyo ethetha ukuba ikhulela kwelinye icala lomxhuzulane. Nangona sichazile ukuba yinxalenye yomoya wesityalo, inyaniso kukuba kukho iindidi ezininzi zeziqu kunye nemisebenzi yazo:
Iziqu zinokuhlelwa ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa zidla ngokuhlelwa ngokwemeko-bume ezifumaneka kuyo, ngaloo ndlela zahlula phakathi komhlaba kunye neziqu zasemoyeni.
Iziqu ezingaphantsi komhlaba zihlulwe zibe zii-tubers, i-rhizomes kunye ne-bulbs.
Iziqu zasemoyeni Zinokwahlulwa zibe ziziqu ezimile, ii-stolons, iziqu ezinyukayo kunye neziqu ezijijekileyo, kodwa kukho iziqu ezikhethekileyo ezifana ne-prickly, stoloniferous okanye i-tendril.
Njengoko besitshilo, omnye wemisebenzi emibini ephambili yesiqu kukuxhasa yonke indawo esemoyeni yesityalo. Olunye luthutho lwezondlo kunye nezinto ngaphakathi kwesityalo. Ukusuka ezingcanjini, okubizwa ngokuba yincindi ekrwada inyukela kwi-stem tube ukuya emagqabini, apho ithi ityetyiswe ngecarbon dioxide kwaye ivelise incindi ecolekileyo, ekukutya kwesityalo.
Iingcambu zibonakala lula kwizityalo ezininzi. Se ijongana nenxalenye yebranched efumaneka ngokuqhelekileyo phantsi komhlaba. Inceda ukondla isityalo ngezondlo eziphuma emhlabeni. Zililungu lokuqala elikhula izityalo xa zintshula. Kunokuthiwa iingcambu zezona zibalulekileyo kwisityalo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeengcambu kwaye zingahlelwa ngokwahlukileyo ngokuxhomekeke kwi-ankile enikezelwa sisityalo, imilo kunye necala lokukhula.
Iingcambu zinomsebenzi obaluleke kakhulu kwisityalo. Makhe sibone ukuba yeyiphi imisebenzi ephambili yeengcambu:
Njengoko besitshilo, omnye wemisebenzi ephambili yeengcambu kukufunxa amanzi kunye nezondlo ngeenwele ezincinci ezifunxayo abanazo, ukuze bagqithise ukutya ngesikhondo ukuya kwesinye isityalo.
Omnye umsebenzi abawufezayo kukumisa sonke isakhiwo sesityalo embindini, mhlawumbi ngeengcambu ezibambeke nzulu phantsi komhlaba, okanye ngeengcambu zasemoyeni ezibambelele kwezinye izityalo okanye umphezulu.
Ezinye iingcambu zine ukukwazi ukwenza iphotosynthesize okanye zincamathele kwezinye izityalo ukuze zifunxe izondlo zazo.
Amagqabi yenye yezona ndawo ziqaphelekayo kuyo nayiphi na isityalo, zikhona phantse kuzo zonke izityalo naphezu kwazo zonke iintlobo zeemilo, ubukhulu kunye nemibala, ngaphezu koko, amaqabunga ezityalo anemisebenzi ebalulekileyo efana ne-photosynthesis njl.
Zizitho zezityalo, zibhityile kakhulu kwaye ziluhlaza ngombala, ezikhula kwihlumelo okanye izikhondo zezityalo. Ziyakwazi ukuhlelwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo: ngokwe petioles, imida, iimbambo kunye nokumila. Ngakolunye uhlangothi, ukuhlelwa kwayo okusisiseko kusekelwe ekubeni isityalo sigcina amagqabi aso unyaka wonke kwaye ahlala ehlala, okanye ukuba siyawalahla kwiinyanga ezibandayo kwaye amaqabunga.
Amagqabi ikakhulu azalisekisa imisebenzi emithathu:
Zenza iphotosynthesis ukuze zifumane amandla ekhemikhali kwimitha yelanga.
Zivumela izityalo ukuba ziphefumle kwaye zitshintshe iigesi ebusuku.
Babila, nto leyo evumela amanzi agqithisileyo ukuba aqukuqelele kubo.
Kwimeko yezityalo ezininzi, intyatyambo yeyona ndawo inomtsalane ebantwini, kwaye inoxanduva lokuzala kwesityalo. Iintyatyambo zihlala zinemibala eqaqambileyo ngenxa yesi sizathu: ukutsala izinambuzane ezihambisa ipoleni. Kodwa nangona kunjalo, zonke izityalo zivelisa iintyatyambo.
Kukho iintlobo ngeentlobo zeentyatyambo ezahlukeneyo ngobukhulu, umbala, ukumila kunye nevumba. Iintyatyambo zinecalyx, corolla, stamens, filaments, kunye neepistils. I-pollen ikhona kwi-stamens (izitho zesini zesini zezityalo), kwaye inkqubo yokuvelisa izityalo ezitsha yenzeka xa i-pollen ithuthelwa kwi-pistils yamalungu amabhinqa.
Ayizizo zonke izityalo ezivelisa isiqhamo, kodwa ezo zivelisa ngokwesini ngembewu zidla ngokuvelisa isiqhamo. Xa intyatyambo ivundisiwe, ivelisa imbewu eyenza iziqhamo ezijikeleze kuyo. Njengamagqabi neentyatyambo, zininzi iindidi zeziqhamo okanye imifuno. Nasiphi na isiqhamo oqhele ukusitya sisiqhamo sesityalo okanye somthi, kodwa kukwanjalo neziqhamo esizitya njengamandongomane.
Umsebenzi wesiqhamo udla ngokukhusela imbewu ngelixa uququzelela ukusasazwa kwayo ngemisebenzi yezilwanyana, edla isiqhamo kwaye ifake imbewu kwenye indawo, ngaloo ndlela iququzelele ukuveliswa kweentlobo.
Imbewu ibalulekile kwizityalo ukusukela oko ngazo zinokuqhubeka nemfuza yazo. Zininzi iindidi: ezinamaphiko, zincinci kuneentloko zekhonkwane, ubukhulu bebhola yentenetya ... Ukuze kuhlume, kubalulekile ukuba iimeko zilungele uhlobo ngalunye. Ke, ukuba, umzekelo, uvela kwindawo yokuhlala apho ubusika bubanda kakhulu, ukwenzela ukuba bahlume kuyakufuneka ukuba amaqondo obushushu asezantsi.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neenxalenye zesityalo kunye neempawu zayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Iinxalenye zesityalo